Sabotsy Mahafinaritra Nataon’ny Ekipa GB Nandritra Ny Lalao Olaimpika 2012 Tany Londona · Global Voices teny Malagasy
Sabotsy Mahafinaritra Nataon'ny Ekipa GB Nandritra Ny Lalao Olaimpika 2012 Tany Londona
Voadika ny 10 Septambra 2012 7:23 GMT
Ampahany amin'ny lahatsoratray manokana mikasika ny Olaimpika 2012 tany Londona ity lahatsoratra ity.
Nahita fandresena vitsivitsy tao anatin'ny iray andro tamin'nySabotsy 4 Aogositra 2012 ny ekipa nasionalin'ny mpampiantrano ny Lalao Olympika tany Londona (fantatra amin'ny anarana malaza hoe #TeamGB) rehefa niadam-panomboka.
Nahazo medaly volamena enina, ny telo tamin'ireo azo tamin'ny taranja hazakazaka sy ny fanao anaty kianja, tsy afaka ny hahita tsaratsara kokoa noho izay ho an'ireo olona 80.000 faran'ny ambony indrindra zakan'ny Stady Olaimpika .
Maneho ny fanohanany ny tanora mpankafy ny Ekipa GB. Sary avy amin'i David Mbiyu, fahazoan-dalana Demotix (31/07/2012).
Manana zavatra holazaina toy izao manaraka izao ny bilaogy School to Scalpel mikasika ny Lalaon'ny Ekipa GB:
Ka nizotra tsara ihany izany ny Olaimpika, sa tsy izany! Nahagaga ny omaly [Sabotsy]. Nanaraka ny Olaimpika mihitsy aho ny farany tamin'ny Olaimpika mba hahita an'i Greg Rutherford mibata ny volamena teo amin'ny 8.31m sy hahita an'i Jessica Ennis voalohany tamin'ny 800m misy fefy (ary naharesy lavitra) nahazo ny volamena tamin'ny Heptathlon (lavitra ihany koa ny elanelana). Hitako ihany koa ny fotoana tsara vitan'i Mo Farah niezaka be tamin'ny farany ka nandresy tamin'ny hazakazaka 10.000m. Tena andro lehibe iny ho an'ny ekipa GB.
Hitako hoe mahafinaritra ny fomba anosehan'ny Olaimpika ny fitiavan-tanindrazan'ny tsirairay sy ny fitarihany ny olona hitambatra. Manainga ahy hanao fanatanjahantena bebe kokoa ihany koa izy ity. Tsy dia hoe mahay loatra ny tenako – haiko fa tsy hanao Olaimpika izany mihitsy aho, na koa hoe handresy amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena fa tiako ny manao izany. Isan'irony olona mahatsikaiky izay tsy afaka mijery fotoam-panatanjahantena ireny aho raha tsy tiako mihitsy ny manao ilay izy aloha [sic].
Nijery ny herinandro voalohany nihetsehan'ny Ekipa GB ny bilaogin'i Katie Talks:
Ka dia vita izany izay iny herinandro iny izay nanarahana ny Olaimpika tany Londona ary dia herinandro nahafinaritra tokoa. Nanaitra antsika mihitsy ny atleta avy amin'ny Ekipa GB nitondra antsika ho amin'ny laharana fahatelo teo amin'ny filaharan'ny medaly… Ny Sabotsy alina tamin'ny atletisma no tena fotoana nahafinaritra ahy indrindra hatreto. Nifarana tamin'ny fisongadinan'i Mo Farah nandresy tamin'ny 10.000m sokajy lehilahy ny alina, nahafinaritra ny nahita ny vadiny sy ny zanany vavy nandray azy teny amin'ny toeram-pihazakazahana, mahafinaritra tokoa ny vadiny, vesaran'ny vohoka nefa dia falifaly, tony ary tena sambatra. Ny zava-bita tsara indrindra tamiko dia ny avy amin'i Jessica Ennis, tena atleta mahafatra-po izy. Ataoko hoe tena goavana koa ny fitiavany ny olona, misy ny atleta sasany jerena toa matotra be ary tsy dia miraharaha ny manodidina azy fa izy kosa sahala amin'ny mitsiky foana sy mandrisika ireo olona hankahery azy.
Nanana lahatsoratra marina nitondra ny lohateny hoe ‘Volamena Volamena Volamena Volamena Volamena Volamena’ ny’ The Musings of an Aspiring Journalist (Ny revin-gadran'ny mpifaninana ho mpanao gazety iray ) :
Izaho irery ve no nanana ny Spandau Ballet nikorintsana eran'ny lohako? Tena alina niavaka mihitsy iny alina iny ho an'ny atleta Birtanika ary tena andro niavaka mihitsy ho an'ny Fanatanjahantena Britanika. Volamena roa tamin'ny hazakazaka, ny iray an-tanety, ny efatra tamin'ny fiantombohan'ny andro nozaraina teo anelanelan'ny onin'i Eton sy ny toeram-pihazakazahana am-bisikiletin'ny Tanàna Olaimpika. Fa angaha vao sambany ny fanatanjahantena Britanika no nahita ny zavatra toy izao? Na izany aza, mbola tsy tsaroako mihitsy hoe nahita alina toy iny aho, ary mino mihitsy aho fa tsy hahita andro hafa sahala amin'iny fahombiazan'ny fanatanjahantena Britanika iny intsony aho mandritra ny androm-piainako, na dia manantena an'izany ihany aza aho, mino aho fa mety tsy ho zakako intsony izany!
Nitatitra ny bilaogin'i MyFashionConnect fa nanomana hajia manokana ho fahatsiarovana ny mpandresy Britanika nahazo medaly volamena ny sampan-draharaha ao amin'ny paositra Royal Mail:
Maraina mahafinaritra androany, taorian'ny alina nampatahotra. Araka ny efa nampanatenaina, dia hanonta hajia vaovao ny Royal Mail amin'ny Alahady maraina hampiditra ireo mpandresy tamin'ny Lalao Olaimpika farany teo ho amin'ny andianà hajia vaovao hanomezam-boninahitra Ireo Britanika rehetra nahazo Medaly Volamena. Mazava ho azy fa ahitana an'i Jessica Ennis – vehivavy mpanao Heptathlon , Greg Rutherford – Hazakazaka misy fefy ary i Mo Farah – 10.000m lehilahy, ny fanampiny vaovao amin'ity maraina ity [Alahady]. Manampy ny lisitra fenon'ireo nahazo Volamena tao amin'ny ekipa GB izy ity, nitondra ny isa tsy mampino ho 14 hatreto.
Hajia Olaimpikani Royal Mail.
Ampahany amin'ny lahatsoratra manokana mikasika ny Olaimpika 2012 tany Londona ity lahatsoratra ity.